Mandeha any Etazonia? Ny fepetra momba ny sisintany COVID dia mijanona amin'ny toerany rehefa miverina any Canada ianao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Mandeha any Etazonia? Ny fepetra momba ny sisintany COVID dia mijanona amin'ny toerany rehefa miverina any Canada ianao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Mandeha any Etazonia? Ny fepetra momba ny sisintany COVID dia mijanona rehefa miverina any Canada ny mpandeha.
Ny mponina Kanadiana dia afaka manamarina amin'ny faritany na faritany niaviany momba ny fahazoana porofo momba ny vaksiny COVID-19 hanamora ny fiverenany any Canada.
Ny mpandeha dia tokony hanamarina raha mahafeno fepetra hiditra ao Canada izy ireo ary mahafeno ny fepetra rehetra ilaina alohan'ny handehanana any amin'ny sisintany.
Ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka izay afaka miditra any Canada dia mbola iharan'ny fitsapana tsy maintsy atao amin'ny fahatongavana.
Ny fitsapana antigène, izay matetika antsoina hoe "fitsapana haingana", dia tsy ekena.
Amin'ny 8 Novambra 2021, ny Etazonia dia hanomboka hamela ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka avy any Canada hiditra ao Etazonia amin'ny toerana an-tanety sy sambo fidirana noho ny antony tsy misy dikany (tsy ilaina), toy ny fizahan-tany.
Ny Canada Border Services Agency dia te hampahatsiahy ny mpandeha fa mijanona ny fepetra momba ny sisintany ho an'ireo mpandeha miditra na miverina any Canada ary tokony hampahafantarina sy hahatakatra ny adidiny izy ireo rehefa manao ny drafitry ny dia.
Ny mpandeha dia tokony hijery raha mendrika ny hiditra izy ireo Kanada ary mahafeno ny fepetra rehetra hidirana alohan'ny hidirana amin'ny sisintany. Ny mponina Kanadiana dia afaka manamarina amin'ny faritany na faritany niaviany momba ny fahazoana porofo momba ny vaksiny COVID-19 hanamora ny fiverenany any Canada.
Ireo mpandeha efa vita vaksiny tonga any Canada dia tsy maintsy mamita ny fitsapana COVID-19 molekiola tsy maintsy tonga mialoha ary manolotra ny mombamomba azy ireo, anisan'izany ny porofo nomerika momba ny vaksiny amin'ny teny anglisy na frantsay amin'ny fampiasana maimaim-poana. ArriveCAN (App na tranokala) ao anatin'ny 72 ora alohan'ny hidirana Kanada. Ny fitsapana antigène, izay matetika antsoina hoe "fitsapana haingana", dia tsy ekena. Ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka izay afaka miditra any Canada dia mbola iharan'ny fitsapana tsy maintsy atao amin'ny fahatongavana.
Ho an'ny dia fohy, izay latsaky ny 72 ora, ny olom-pirenena kanadianina, ny olona voasoratra anarana eo ambanin'ny lalàna indiana, ny mponina maharitra ary ny olona voaaro mandeha any Etazonia dia avela hanao ny fitsapana molekiola mialoha ny fahatongavany alohan'ny handaozany an'i Canada. Raha mihoatra ny 72 ora ny fitsapana rehefa miditra indray any Kanada izy ireo, dia takiana ny hanao fitsapana molekiola mialoha ny fahatongavany any Etazonia.
Ireo mpandeha tsy vita vaksiny na ampahany izay afaka miditra Kanada dia tsy maintsy manohy manaraka ny fitakiana fitiliana COVID-8 mialoha ny fahatongavana, ny fahatongavana ary ny andro faha-19, ary ny confinement mandritra ny 14 andro.
Mety hisy fahatarana amin'ny seranana fidirana ny mpandeha noho ny fepetra momba ny fahasalamam-bahoaka satria ny CBSA dia tsy hampandefitra ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana noho ny fotoana fiandrasana sisintany. Ny CBSA dia misaotra ireo mpandeha noho ny fiaraha-miasa sy ny faharetany.
Ny fanontaniana rehetra momba ny fidiran'i Etazonia sy ny fepetra ara-pahasalamana, dia tokony halefa any amin'ny US Customs and Border Protection.